Fanamboarana ny faritra lemaky ny Pepper Creek miaraka amin'ny kitapom-bolongana naverina amin'ny laoniny
Fanarenana ny faritra lemaky ny Pepper Creek
Jona 26, 2013
Fandresena mivoaka ho an'ny Boaters sy ny Bays
Nataon'i Bartholomew Wilson, Mpandrindra Siansa
Tsy ny zavatra zakan'ny mponina ao amin'ny Inland Bays ihany no atao any an-trano.
Misy tetik'asa fanamboarana fanaovan-tsarimihetsika vaovao hita eo amin'ny Inland Bays.
Ny CIB dia niara-niasa tamin'ny Departemantan'ny Delaware momba ny harena voajanahary sy ny fanaraha-maso ny tontolo iainana (DNREC) mba hamerenana ny sain-dresaka avy ao anaty fantsona mba hanamboarana ny sakeli-dranon'ireo Inland Bays.
Ao anatin'ny ezaka fiaraha-miasa hanafoanana ny filàna tranobain-drendrika vaovao ary mampiseho ny fahafahan'ny fampiasana an'io fitaovana io mba hanalefahana ny fiantraikan'ny fiakaran'ny marsh sy ny fiakaran'ny ranomasina, ny DNREC sy ny CIB dia nametraka ny fahitan'izy ireo ny faritra 25-hektara ny velaran-tany mifanakaiky amin'i Vines Creek Marina.
Amin'ny dingana iray antsoina hoe famerenam-bokatra mahasoa, ny fitaovana dredge dia ampiasaina hananganana tohodrano mivonto izay very haavo, ara-bakiteny, vokatry ny fiakaran'ny ranomasina. Ny fiakarana ny haavon'izy ireo dia hahatonga azy ireo ho mora tohina kokoa amin'ny fiantraikan'ny fiakaran'ny rano, vokatry ny fiakaran'ny haavon'ny ranomasina sy ny fametrahana ny tanimbary.
Ny fitaovana dredge dia avy amin'ny tetikasa dredge DNREC hanalinana ny fantsom-panidinana amin'ny Pepper Creek ary hanatsara ny fidirana amin'ny fivezivezen'ny sambo. Raha ny mahazatra, ny fitaovana dredge dia hapetraka ao amin'ny trano fanariana trano, fa ity tetikasa ity dia mametraka ny fako fa mitazona ny fitaovana ao anaty rafitra.
Ny fikarohana amin'izao fotoana izao dia naneho fa ny fanesorana ny dredge fitaovana amin'ny fantsona sy ny fanariana azy amin'ny faritra ivelan'ny halehiben'ny alika dia mety hiteraka tsy fahampiana maharitra mandritra ny habetsaky ny sediment izay misy ao amin'ilay rafitra ary misy ny fizotry ny voajanahary re - ny fanamboarana ny sakamalaho; manakiana ny fahafahan'izy ireo mihazona ny avo sy miakatra amin'ny haavon'ny ranomasina.
Ahoana no nahavitany azy
Rehefa nandady tongotra maromaro tao ambanin'ny fantsona ny dredge dia nalaina ho lasa fantsona 8 santimetatra izay milentika anaty rano, avy eo dia alefa amin'ny fantsona mankany amin'ny fefy iray eo amoron'ny sisin-dàlana. Ny fitaoman-dredge dia voatery avy eo amin'ny tsipika misy tsipika avo lenta 4 ary hamafisaka ao anaty renirano lava mankany amin'ny tany lemaka. Ny nozzle dia azo arakaraka ny hitarika ny menaka any amin'ny toerana samihafa.
Rehefa miparitaka izy io, ny slurry volontany, izay rano 90% ary ny sedra 10%, dia mikoriana manerana ny rano ary mametraka any anaty faritra ambany amin'ny lemaka. Antenaina fa hatreo amin'ny mason-jaza iray ka hatramin'ny enina santimetatra no hipoitra amin'ny làlana, ary ny faritra ambany no ahazoana fitaovana matevina.
Ity fomba famafazana ny filentena dredge amin'ny lalam-pasika dia somary vaovao amin'ny Delaware, saingy ity fomba fanao amin'ny fantsom-panondrom-bary maloto ity dia nampiasaina hamerenana ny sakamalaho amin'ny Gulf Coast of Texas, Louisiana, ary Alabama nandritra ny taona maro. Ho an'ny DNREC, io dia afaka manamarika vanim-potoana vaovao amin'ny fikororohana sy fikojakojana ny fantsona fitetezana ny Inland Bays. Izay taloha taloha fako tsy vidy nesorina sy nariana, dia loharanon-karena lehibe eo an-toerana izay azo ampiasaina hanampiana amin'ny famerenana ireo honahona sy ny serivisy ilaina amin'ny feta; fanivana ny rano, potipotika ny tany amin'ny rivo-piainana, ary manome tokan-jaza amin'ny fanjonoana sy trondro.
Mitohy hatramin'ny taratasy marobe 31 ny fampiharana apetaka eo amin'ny Pepper Creek, raha najanina ny fandidiana mandra-pahatongan'ny ririnina amin'ny manaraka mba hanamaivana ny fiantraikan'ny vondron-trondro ao amin'ny farihy. Hanomboka amin'ny fararano indray ny asa.
Ity ekipa ity dia ahitana ny solontena avy amin'ny DNREC's Shoreline and Waterway Section, Watershed Assessment Section, Wetland and Subaqueous Sect, Division of Fish and Wildlife, ary ny Delaware Center for the Inland Bays izay miara-miasa mba hanehoana ny fahombiazan'ny fampiasana mahasoa amin'ny fomba famerenana ny dredge materiale ao amin'ny Bays Inland.
Ka amin'ny manaraka rehefa mahita fotaka miparitaka eny amoron'ny Onland Bays ianao dia aza manahy fa tsy fantsom-boazo akory izany, fanarenana ny tanety amin'ny alàlan'ny fanodinana indray, mazoto miasa amin'ny fanamboarana ny dianay.
Namboarina avy amin'ny Inland Bays Journal